Bvisa maMoles - Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Kuti Uvaonekere Kwavari | Bezzia
How kubvisa moles
Susana godoy | 22/04/2021 14:00 | Runako, Utano
Vanhu vazhinji vanonetseka kana vachigona kubvisa mamota kumba. Asi mhinduro haisi nguva dzose izvo munhu angade kunzwa, nekuti zvinodikanwa kuti uve nechokwadi cheicho zvipo zvedu, zvakanakisa kubvunza chiremba. Iye chete ndiye anogona kutipa mirayiridzo inodhura kwazvo.
Ichokwadi icho kune hunyengeri hwakawanda uyezve, mishonga iyo yatinogona kushandisa kutaura zvakanaka kumamota. Kunyangwe, sekutaura kwatataura, hazvikuvadze kuziva zvishoma nezve zvese zvine mhando yerudzi urwu pachivara paganda. Chokwadi iwe zvakare une mamorero asingaverengeki pamuviri wako!
1 Zvipfukuto zvingabviswa sei
2 Ndingabvisa sei mole mumusha
2.1 Apple cider vhiniga
2.4 Bhanana svuura
3 Chii chinoitika kana munhu akabvisa mole?
4 Vanobvisa rini riya kana vanga rasara?
5 Chii chinoitika kana iwe ukabvisa mole kubva kumeso kwako
Zvipfukuto zvingabviswa sei
Ichokwadi ndechekuti zvakadaro chete dermatologist ndiyo ichave inosarudza kurapwa kwekubvisa mamota kubva mumuviri. Pamwechete, vazhinji vacho havafanirwe kumiririra njodzi, asi dzimwe nguva ichokwadi zvakare kuti tinogona kushandisa dzimwe nzira kuti tikwanise kutaura zvakanaka. Pakati pavo, pane matatu ayo anonyanya kukurudzirwa kana, ngatitii, anonyanya kushandiswa:
Kune rimwe divi kune kuvhiya, inova nzira inoitwa pasi peanesthesia yemuno. Zvirinani kurara nzvimbo yacho zvakanaka nekuti tichave takatarisana neyakaomarara mole iyo inofanirwa kuburitswa uye nekudaro, kuvhiyiwa kunoiswa kune zvakati wandei zviitiko uye ivo vanokupa imwe poindi. Kunyangwe, sezvatakambotaura, dermatologist ichavawo neshoko rekupedzisira.
Iyo laser ndeimwe yeakakura matekiniki ayo vazhinji vedu tinoona nhasi maererano nerunako, izvo zvinoita kuti isu tiwane nekukurumidza mhinduro uye pamwe tisingazvizive. Semutemo wenguva dzose, hapana anesthesia yerudzi chero ipi zvayo inodikanwa ne laser kurapwa. Iyo inokurumidza maitiro uye iwe unenge usina vanga.
Iyo yekuveura kana yekukwesha maitiro, sekuratidzwa kwezita rayo, inotoda anesthesia yemuno zvakare, nekuti iyo nzvimbo yepamusoro inonyanya kutemwa. uye izvi zvinoshandiswa kana ma moles aine zororo rakakura. Iyo vanga richasara richava diki kwazvo uye rinenge risingabatike.
Ndingabvisa sei mole mumusha
Kubvisa mamota harisi nguva dzese basa ratingaite kudzora uye shoma kumba. Nekuti dzimwe nguva isu tinofanirwa kudzidzawo hunhu hwechi mole pachayo uye kudzidza kuziva riini zvimumumu zvine ngozi kana kwete. Kutanga kubva pane izvi, isu takasiiwa neimwe yehunyanzvi iyo iwe yaunogona kuisa mukuita kumba, iwe pausingachadi kuona iyo mole.
Ichokwadi kuti isu tinofanirwa kuziva kuti mishonga yechisikigo haiwanzoshanda zvakafanana isu tese. Asi zvakadaro, imwe yeanonyanyo shandiswa apple cider vhiniga. Pasina kupokana, shamwari yakanaka yerunako sezvo zvichinzi inogona kudzikisira muviri, kuchenesa meno uye kutobvisa varicose mutsinga. Saka mune ino kesi, ichave zvakare yekutarisira yekuonekana kuonekana nemamota. Zvayo, edza kunyorova bhora rekotoni neiyi mvura uye kuiisa pane yakasarudzwa mole, uchisiya iyo husiku. Iwe uchafanirwa kudzokorora maitiro acho kusvikira iwe waona kugadzirisa.
Kana iri yemuviri iri, yeganda haisi kumashure kumashure. Garlic inobatsira herpes kana maronda, pamwe nedermatitis uye kunyangwe mapundu kana mapundu anoonekwa pese paganda. Zvakanaka, mune ino nyaya isu tiri kuzoshandisawo kubvisa moles uye tichazviita sei? Zvakanaka isu tinoda kupwanya akati wandei egariki clove uye toisa iwo musanganiswa pane iyo mole iri mubvunzo. Ivhare ne gauze uye uisiye husiku. Mumazuva mashanu kana matanhatu uchaona mhedzisiro.
Kana paine chimwe chigadzirwa chine zvakawanda zvakanakira muviri, vhudzi uye ganda, huchi. Kunyangwe isu tauya ne couplet, chokwadi ndechekuti mune ino kesi tichaishandisa kuti tibatsirwe kubva kune yakanakisa mhedzisiro nema moles. Asi rangarira kuti iyo yakachena, iri nani mhedzisiro yacho ichave iri zvakare. Saka, isu tiri kuzongoshandisa shoma shoma, iyo inogona kuvhara iyo mole yacho pachayo, zvakare tinofanirwa kuifukidza zvakanaka uye kumirira maminetsi mashoma. Kuti ubudirire, unogona kurishandisa mangwanani uye nehusiku uye uchaona kupenya kwaro.
Sezvo chiri chibereko icho chatinowanzova nacho kumba, hapana dambudziko kana zvasvika pakushandisa peel yacho zvakare. Zvayo, tinoda kucheka chidimbu chegobvu tichichiisa pane mole. Zviri nani kuzviita husiku, nekuti mushonga uyu haufanire kusuka, saka wakareba, zvirinani. Zvakakwana zvakasikwa uye kuti tinogona kudzokorora mazuva ese kana tichida, kukwanisa kuona mhedzisiro nekukurumidza sezvazvinogona.
Chii chinoitika kana munhu akabvisa mole?
Chokwadi ndechekuti kana chiremba ane ruzivo sachiremba wako wenguva dzose kana dermatologist achifunga kuti iwe unofanirwa kubvisa mamwe mamore, ndizvo zvaunofanira kuita. Nekuti kana vabviswa zvachose, havadzoke. Ichokwadi kuti izvo zvakaraswa zvinogona kukura zvakare, asi chero zvodii, hapana chaizoitika nekuti chingave chiitiko chechisikigo. Ndokureva, mune izvi hazvireve kuti ivo vakaipa nekuda kwekukura kukura. Chingangove chinhu chechisikigo kuti chibvise, asi kwete zvizere, zvisati zvaitika. Iko kusahadzika kunouyawo kubva kumamota ane vhudzi mukati. Ivo vakasarudzika asi hapana chimwe chinopfuura icho. Pamusoro pezvo, zvinokurudzirwa kuti vhudzi rakatemwa pane kungodzurwa newax, kuitira kuti rikapisa kana kutapukirwa.
Vanobvisa rini riya kana vanga rasara?
Tisati tatoita fungidziro shoma kune iyo nyaya asi hazvikuvadze kuti isu takanyatso kujekesa. Nekuti ipapo chete ndipo patinozove takadzikama kana iyo nguva ikasangana nekutarisana nekusaonekana neyakajairika mole. Ndokusaka zvichizogara zvichienderana nerudzi rwekurapa iyo inosarudzwa kuti ikwanise kubvisa mwedzi. Asi Kana isu tichitaura nezvekuvhiya kunotora kubvisa mudzi wakadzika, ipapo iyo incision ichasiya mucherechedzo kunge vanga.
Asi zvinofanirwa kutaurwa kuti inogona zvakare kunge iri mhando shoma. Sezvo isu tichiziva kwazvo, mushure mekubviswa kunoitwa mushure mekuvhiya uye ipapo isu tinofanirwa kurapa ronda zvinoenderana nemirairo yechiremba. Chii chichaita kuti kuchengetwa kwakadai kuvewo nekukosha muchikamu chekupedzisira chacho. Semutemo wakajairika, kana uine mamaki akasara, anenge ari mashoma, saka haatombofanirwa kukosheswa. Nekudaro, isu hatifanire kunetseka nezvenyaya iyi kana tichibvisa mamori.
Chii chinoitika kana iwe ukabvisa mole kubva kumeso kwako
Ichokwadi kuti haazi ese ma moles akafanana. Isu tinoziva kuti ese maviri mavara uye maumbirwo kana magumo anogona kuoneka kwese pamusoro peganda. Nekudaro pane imwe yeiyo iyo inotora bulging mole. Naizvozvo, kana iwe uine icho kumeso kwako, zvinogona kunge kuti wakazvibata kana mune zvevarume, kuti wapasa banga kana uchiveura. Ndokunge, zvinogona kuve zvakajairika kuti tinokonzeresa kukuvara. Asi kana iwe ukasvika pano, haufanirwe kutya. Ichokwadi kuti pane ngano inoti kana ikabuda ropa yakatoipa kana kuti inogona kuzoipa kana tikazvikanganisa, asi kwete.
Kana izvo zvatichangobva kutaura zvikaitika kwauri, zvichave zvisina kugadzikana nekuda kweronda zvarinosiya asi hapana chiri kumberi kubva pakufunga kuti chingave chinhu chakaipa paganda. Kana yatove kukukonzeresa kusagadzikana kwakawanda, saka zvakanak kuti ubvunze uye kuti dermatologist asarudze kuti oibvisa here.
Une mamota here? Wakambobvisa chero kana uri kufunga kuzviita?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » How kubvisa moles
Nzira yekutarisira yakaratidzwa bvudzi
Mafirimu ayo achaburitswa mumitambo inotevera Chivabvu